डिभिएम नभत्काउँ उपमहानगर मातहत ल्याएर नमुना स्कुल चलाउँ | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » News, Staff Profile » डिभिएम नभत्काउँ उपमहानगर मातहत ल्याएर नमुना स्कुल चलाउँ
Posted by Itahari Fm | error | ५१६ पटक
इटहरी उपमहानगरपालीका वडा नं ९ मा रहेको इटहरीको एउटा नाम चलेको स्कुल नेपाल डिभिएम ग्लोबल स्कुल यतिबेला विवादको केन्द्रमा छ । सञ्चालकहरु लगानी जोगाउने कसरतमा छन । इटहरी उपमहानगरपालीकाका मेयर द्वारीकलाल चौधरी भने भवन भत्काउने आक्रमक चेतावनी दिइरहेका छन् । इटहरीमा सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण गर्न भन्दै सुरु भएको अभियानका सम्पूण किस्सा यो विवादसँग जोडिएर हेरिएको छ । यदि डिभिएम स्कुलले अतिक्रमित गरेको जग्गा उपमहानगरले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्छ । तव मात्र अरु ठाउँका जग्गा ल्याउन सक्छ भन्दै प्रतिष्ठाको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । अन्य जग्गा ओगट्नहरु भोली आफुले छाड्नु पर्ला या नपर्ला भन्दै विवादको निकास पर्खी रहेका छन् । यता, उपमहानगर पनि यहि एक विवादबाट सवैलाई एकै पटक मात खुवाउने दाउमा छ । यहि बेला ठुला माछालाई तह लाउन सकियो भने साना माछा आफै लाईनमा लाग्छन् भन्ने उपमहानगरको च्याँखे दाउ छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचनमा जननिर्वाचित भएर कार्यभार सम्हाले पछि मेयर द्वारिकलाल चौधरीले ऐलानी र अतिक्रमीत जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरे । तातो जनमतको उत्साहमा घोषणा गरिए बमोजिम मेयर चौधरीले समिती बनाएर जग्गा खोजे । नभन्दै पहिल्यै दाउमा डिभिएम स्कुल पर्यो । इटहरी ९ बुढिखोला किनारमा रहेको डिभिएम स्कुलले आफ्नो थोरै जग्गा देखाएर धेरै सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको भेटियो । डिभिएम स्कुलले ओगटेको जग्गा मध्ये ६ कठ्ठा ५ धुर मात्र उसको स्वामित्वमा रहेको प्रमाण पेस गरेको छ । विद्यालयले झण्डै ३ विगाह ३ कठ्ठा ३ धुर जग्गा सार्वजनिक प्रयोग गर्र्दै आएको पाईएको छ । विद्यालयले जग्गा हडप्न आफ्नो जग्गा पछाडि खाली छाडेर सार्वजनिक जग्गामा भवन र खेल मैदान बनाएको भेटिएको छ । विद्यालयले सरासर जग्गा हडप्ने नियतले सो चलखेल गरेको उपमहानगरको दावी रहेको छ । स्वामित्व नै नरहेको जग्गा मेरो भन्दै घेराबारा गरी प्रयोग गरेको विद्यालयले अहिले सो जग्गा छाड्नु पर्ने भएको छ ।
उपमहानगरले आफ्नो सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन पटक पटक विद्यालय प्रशासन र सञ्चालकलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । तर सुरु सुरुमा विद्यालय प्रशासन र सञ्चालकले हल्का रुपमा लिँदै वेवास्ता गरेका थिए । तर अहिले मेयर द्वारिकलाल चौधरीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक जग्गामा रहेको भौतिक संग्रचना भत्काउने चेतावनी दिएका छन् । यस अघिका आग्रहमा अडिक रहेका विद्यालय सञ्चालक अहिले भने गलेका छन् । विद्यालय सञ्चालक र उपमहानगरपालिकाका मेयर वीच पटक पटक वार्ता भएको छ ।आईतबार साँझ उपमहानगरले ४ विकल्प दिँदै सहमतिमा आउन आग्रह गरेको थियो । सहमतिमा नआए सोमबार संग्रचना भत्काउने मेयर चौधरीले चेतावनी दिएका थिए । तर विद्यालय सञ्चालकहरुले सोमबार थप २ दिनको समय माग गरेका छन् ।
के हुन मेयरका सर्त ?
पछिल्लो पटकको वार्तामा उपमहानगरले डिभिएम विद्यालय सञ्चालकलाई ४ विकल्प दिएको छ । चार विकल्प मध्ये उपमहानगरपालिकाले भौतिक संग्रचना रहेको जग्गा लिजमा दिने, विद्यालयको जग्गा र उपमहानगरको जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने, भौतिक संग्रचनाको लगत स्टिमेट गरी सो मुल्य उपमहानगरपालिकाले किस्ताबन्दिमा तिर्ने र उपमहानगरपालिका कानुन बमोजिम जाने र भौतिक संग्रचना भत्काउने रहेका छन् । यी चार विकल्प मध्ये एक छान्न विद्यालय सञ्चालकलाई समय दिईएको छ । सोमबार विहान सम्म समय दिएका मेयरले पुन २ दिनको समय दिएका छन् । विद्यालय सञ्चालकको तर्फबाट वार्तामा बसेका धु्रव सुब्बाले विकल्पको छनौट सहित निश्कर्षमा पुग्न थप २ दिन समय माग गरेका थिए । थपिएको २ दिनले यो विवाद केही समय धकेलिएको छ । तर दुई दिन पछि के हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ । विद्यालय सञ्चालकले कुन विकल्प छान्ने हुन वा उपमहानगरपालिकाले भौतिक संग्रचना भत्काउने हो । यो विवादको निश्कर्ष सुखद होला वा दुखत त्यो हेर्न २ दिन पर्खनु पर्ने भएको छ ।
विद्यालयका सञ्चालक के गर्दैछन ?
मेयरले पटक पटक चेतावनी दिदा पनि नगलेका स्कुलका सञ्चालक यस पटक गलेका छन् । मेयरले अघिल्लो दिन साँझमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भोली(सोमबार) बिहान ६ वजे डोजर लगेर भत्काउछु भने पछि आत्तिएका छन् । नेकपा निकटका सञ्चालकहरु समेत अहिले काँग्रेस पार्टीको शरणमा छन् । उनीहरु मेयरले वार्तामा बस्नै नमानेको, हामीले दिएका अन्य विकल्पको सुनुवाइ नै नगरेको, मैले भनेको मान्छस् की मान्दैनस् भन्ने शैली मात्र अपनाएको गुनासो गरिरहेका छन् । मेयरले दिएको दुई दिनको समयमा विपक्षी पाटीसँग मिलेर बिषयलाई राजनीतिक रुप दिएर भए पनि लगानी जोगाउन विद्यालयका सञ्चालक लागी परेका छन् ।
पार्टीलाई विवादमा ल्याउने प्रयास
करिब ५० जनाको संख्यामा रहेका डी भी एम स्कुलका सञ्चालकहरु सकृय राजनीतीमा खासै देखिएका छैनन् । व्यवसायीक पृष्ठभुमीकै व्यक्ती लगानी कर्ता छन । तर यी व्यवसायी राजनीतीक पार्टीलाई नै प्रभावित बनाउने हैसियत राख्छन् । अहिले एमालेबाट जीतेका मेयरले आक्रमक रुपमा भवन भत्काउने अडान लिए पछि नेकपा पृष्ठभुमीका व्यवसायी पनि अहिले काँग्रेसलाई उपयोग गरेर सम्पती जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छन् । यो बेला काँग्रेसलाई पनि मसला हुुने, सञ्चालकको लगानी पनि जोगीने र बदनामी हुदाँ काग्रेसको मात्रै हुने ठहर गरेर नेकपाकै केही नेताको डिजाइनमा काँग्रेसलाई उपयोग गर्न खोजिदैछ । धरान विराटनगर सडकलाई एउटै मापदण्डको बनाउ भनेर काँग्रेसका केही अगुवा व्यवसायीले भन्दा त्यसलाई अतिरन्जित गरेर काँग्रेसले बाटो फराक पार्न दिएन भनियो । अब सरकारी एैलानी जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहनु हुन्न, नपाको मातहत ल्याउनु पर्छ भन्दा पनि काँग्रेस विरोधमै लाग्यो भनेर काँग्रेसलाई बदनाम गर्न खोजिदै छ । तर काँग्रेस निकट स्कुलका सञ्चालक र केही व्यवसायी भोलीको दिन नसोची सम्पती संरक्षणमा छन् । व्यक्तिको सम्पतीको सुरक्षा हुनै पर्छ । तर त्यसको अर्थ सार्वजनीक जग्गा कसैले हडपेर व्यापार गरि रहनु हुन्न । एउटा जिम्मेवार पार्टी र त्यसका नेताले के के न मसला पाइयो भनेर उपयोग हुनु गलत हुन्छ ।
निकास के हुन सक्छ ?
मेयरले दिएका चार वटा अप्सन मध्ये कुनै अप्सनमा सहमती गर्न सकिन्छ । तर बनी सकेको एउटा संरचना बिगार्नु भन्दा भएको संरचना नगरपालीकाले लिएर आफ्नैै मातहतमा एउटा नमुना स्कुल चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । जहाँ गरिब,असहाय बच्चा निशुल्क पढाउने व्यवस्था पनि होस् । अथवा साझेदारीमा चलाउने, भवन मुल्याँकन गर्ने, जती मुल्य हुन्छ त्यस बराबरको शेयर अहिलेकै सञ्चालकलाई दिने,जग्गा लगायत सम्पतीको मुल्याकन गरि त्यस बराबरको शेयर नगरपालिकाले लिने, स्थानीय भाषाको समेत पाठ्यक्रम बनाएर पठन पाठन गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा नगरपालिकाको पनि एउटा नमुना काम हुनेछ । सञ्चालकको सम्पतीको पनि संरक्षण हुनेछ । गरिब र असहाय बच्चाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने छन् । इगो राखेर भै रहेको त्यत्रो संरचना भत्काएर पार्क बनाउनु एउटा घमण्ड मात्रै हुनेछ । बनी सकेको छ, त्यहाँ स्कुलनै ठिक छ । पार्क त तालतलैयालाई नै व्यवस्थित गरे हुन्छ । त्यहा तेत्रो जमिन उपयोग विहिन जस्तो छ । निजी क्षेत्रले सानो जग्गामा बनाएका पार्क चम्की रहदा तालतलैया टोलाई रहेको हामीले देखेकैैछाँै ।